Gudoomiyaha Maxkamada Sare waxaa la gudboon inaanuu cagaha la gelin dhooqada Dalka ka socota!..W/Q:-Kaysar Maxamed. |
Gudoomiyaha Maxkamada Sare waxaa la gudboon inaanuu cagaha la gelin dhooqada Dalka ka socota!..W/Q:-Kaysar Maxamed.
Kaysar Maxamed iyo Gudoomiye Aadan
Gudoomiyaha Maxkamada Sare waxaa la gudboon inaanuu cagaha la gelin dhooqada Dalka ka socota!
Gudoomiyaha Maxkamada Sare Mudane Aadan Xaaji Cali waa Tiir ka mid ah tiirarka uu Qaranka Somaliland ku taagan yahay, waxaana uu dhex u yahay Ummada reer Somaliland oo dhan.
Maanta waxaa la jooga xiligii isaga Iyo Gudoomiyaha Guurtida Somaliland ay gacan ka geysan lahaayeen muranka u dhexeeya Xukuumada Iyo Xisbiyada Qaranka. Laakiin lama joogo xiligii dhiiqo cagaha loo gelin lahaa kuwii Ummada badbaadin lahaa ee marka ay xaaladu murugto ay Ummadu ku eeran lahayd ee Xalka keeni lahaa.
Waxaan usoo jeedinayaa Xisbiyada Mucaaridka ah iyo kuwa Maxaafidka ahba inaanay fidnadooda ula gelin masuuliyiinta dhawrsan ee Qaranku eeganayo.
Meelna laguma arag Xeer Golihii Xeer-dejinta horyaala oo shaqadiisu ay Golihii u xilsaarnaa ka socoto oo Maxkamad sare lagula orday. Ugu yaraan waxay ahayd marka uu uu Golihii Wakiiladu go’aan ka soo saaro ay markaas cidii ku qanci weydaa ay Maxkamada ay tagto.
Waxaan ugu baaqayaa Gudoomiyaha Guurtida Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan Iyo Gudoomiyaha Maxkamada Sare Mudane Aadan Xaaji Cali inay mar kale soo dhex galaan muranka u dhexeeya Xisbiyada Iyo Xukuumada, si la mid ah sidii ay usoo dhex galeen markii uu taagnaa murankii doorashada shir guddoonka Golaha Wakiiladu.
Tiirarka u sarreeya Qaranka haddii loo arko inay dhinac la saftaan waxay Qaranka u horseedi kartaa dhibaato culus oo aan cawaaqibkeeda la garan karin.
Waxaa la soo gaadhay xiligii uu Caqligu shaqayn lahaa ee ay is hor fadhiisan lahaayeen Madaxweynaha iyo Hoggaanka Mucaaridku, lana heli lahaa Xal lagu soo afjaro muranka jira.